Table ukukhetha ngexesha pa nesendlu isiganeko
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Table ukukhetha ngexesha pa nesendlu isiganeko
Pa onendawo ngexesha isiganeko kubonakala ukuba ngakumbi kumfanekiso yempikiswano, kodwa akukho nto enjalo. Soloko itheyibhile alulame kude ngexesha lo mcimbi ngoku. Kakade ke, ekubeni eliphethwe ekuphumeni, kodwa abe ukuba eqongeni ukuze ukhethe ukuba kulula kuthelekiswa usoloko oyinyaniso, ukuze sinciphise utyalo ngakumbi, uya kwazisa ezikhethiweyo iqonga ngexesha lomsitho zabanjwa.
Okokuqala, ndifuna ukuba baqwalasele kwixesha lo mcimbi imodeli uphawu a kwevenkile nganye. Kuba
imodeli ibhilibhodi iivenkile, kuba uninzi ufuna ukunika imodeli yakho, ngokwaneleyo ukuba isiganeko esikhulu, kufuneka ubeke umkhosi phezu imifuziselo ibhilibhodi kwi pa parlour. Umfuziselo uphawu kuphela, koko uza lokuphucula Horukon kunye uhlengahlengiso isikhonkwane kunokuba njalo eqhelekileyo. Ukhetho model ngexesha lomsitho, khumbula umdlalo imifanekiso ebhodini.
Kunoko, musa ukubeka amandla kakhulu, esiwa emva imodeli ixesha ekuphulukenwe nalo ngexesha siganeko ebizwa ngokuba yi Xintai.
e Xintai, nokuba ngaphandle kokuvula lezikhonkwane, ngoko thina ehleli abathengi ngaphandle ukwandisa Horukon sentlalo, Xintai le wayedla kwimodeli ekuphulukenwe nalo umva. Banikwe
■ apha ebalulekileyo
pa parlour-nkqubo nakwabezoshishino, ukwandisa inani abathengi na isenzo yokukhupha intlawulo, lwenziwa ukuze ngcono nabathengi, olungephi indawo apho kudibana khona abantu ngaphandle kokwenza nantoni na akuyomfuneko ukuba akhuphe. Oku kuya kuba kuhle ukuba sikhumbule ngenxa yokuba esisiseko siseko. Xa ukwazile ukuba
imifuziselo hit, nayo, kodwa data, apha zama ukunikel 'ingqalelo etafileni ekhathazekile imini ngaphambili. Usuku ngaphambi ngesisekelo esinamandla kukuba, kukho ithuba lokuba Horukon iseti kunye uhlengahlengiso iinzipho ayikatshintshi isikhonkwane eqhelekileyo. Nangona kunjalo, kwimeko ukungasebenzi block, ekukhuliseni i Horukon sentlalo, kusenokwenzeka ukuba ukuvula isikhonkwane.
ngexesha siganeko, ngokuba kukho kwakhona imini ofuna lokubhena intlawulo, kodwa nango nobakhuphela, Kakade ke, kuya kuba aqatha ngakumbi zivuthelana intsilelo kwaye wayeza kumvusa Horukon imiselwe olomeleleyo, njengokuba kufanelekile. Ukuza kuthi ga ngoku, ukuma okuqinileyo, ngokuqinisekile eninzi iqhawe njengesiqhelo.
Kwelinye icala, kwitheyibhile ekhathazekile njengoko ephume isikhonkwane, iimpembelelo uya kuba buthathaka kwaye hayi abunikele kuphela njengesiqhelo. Ukongezelela, ethetha ukuba naye lo mcimbi nje ivenkile ukuba akunjalo ngaphandle ziya kulahleka. Ngoko ke, undicaphukisile stand ukufumana isantya ojikeleza ngaso, ngaphandle ukwandisa Horukon amisiweyo, kukho ukuvula isikhonkwane kunesiqhelo.